China Wholesale 4.5 Stainless simbi inotsvedza vatengesi uye Vagadziri - GRX GARMENT (HONG KONG) CO., LTD.
Kumba > Zipper musoro > Stainless simbi YG inotsvedza > 4.5 Stainless simbi inotsvedza
Iyi 4.5YG isina simbi inotsvedza yakaitwa nesimbi isina 304. Iyo kambani yapfuura ISO9001: 2008 mhando manejimendi sisitimu setifiketi.
4.5YG simbi yesimbi inotsvedza
1. Chigadzirwa kuunzwa kwe4.5YG isina tsvina yesimbi inotsvedza
This 4.5YG simbi yesimbi inotsvedza is made of 304 stainless steel. The company has passed ISO9001: 2008 quality management system certification.Iyo ine zvakawanda patent uye yakaunza yakakwana chigadzirwa mhando manejimendi sisitimu. , Zvichienderera mberi kugadzirisa zvinhu zvakasiyana siyana zvehardware uye software, uye edza kutora musika nehunhu.
2. 4.5YG simbi yesimbi inotsvedza product parameters (specifications)
Saizi yemukati yemukati: kukwirira kwemuromo: 2.05-2.15MM
Hurefu hwemuromo: 4.35-4.45MM
Mucheka musono: 0.8-0.9MM
3. Chigadzirwa maficha uye zvinoshandiswa zve4.5YG simbi isina simbir
Iyi isina simbi inotsvedza inonyanya kushandiswa kune majee zipi, ayo ane mukana pamusoro pemutengo wemhangura.
4. Chigadzirwa chigadzirwa che4,5YG simbi isina tsvina
Slider iyi inogona kugadzirisa uremu hweyuniti (senge 780 pcs / KG, 860 pcs / KG) zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, uye wedzera iyo LOGO inodiwa nemutengi.
5. Chigadzirwa chinogadziriswa che4.5YG simbi yesimbi inotsvedza
Kambani yedu yakapfuura iyo ISO9001: 2008quality manejimendi sisitimu chitupa, uye ine huwandu hwepatent Zvese zvigadzirwa zvakaedzwa neSGS ndokuiswa pamusika. Isu takazivisa acomplete yechigadzirwa mhando manejimendi sisitimu, uye tichienderera nekuvandudza varioushardware uye software zvivakwa zvekuvavarira zvemhando Dhimoni musika.
6.Kupaka uye kutumira kwe4,5YGSimbi isina tsvina simbi inotsvedza
Saizi yepakeji imwe chete: 32mm * 21mm * 18mm
Hot Tags: 4.5 Stainless simbi inotsvedza, China, Wholesale, Bulk, Vatengesi, Vagadziri